Home भलाकुसारी कृषि विश्वविद्यालय अहिलेको बजेटमा पनि उपेक्षित : उपकुलपति थपलिया
काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि बिहीबार बजेट ल्याएको छ । संघीय संसदमा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले १४ खर्ब ७४ अर्बको ६४ करोड रुपैयाँको बजेट पेश गर्नुभयो ।
सरकारले बजेट घोषणा गरेपछि विभिन्न तहमा बजेटको बारेमा बहस पनि हुन थालेको छ । सरकारले महत्वका साथ लिएका विभिन्न योजना अहिलेको बजेटमा परे की परेनन् भन्ने विषय पनि अहिले चर्चा पनि हुन थालेको छ ।
यसै सन्दर्भमा हामीले कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय, रामपुर चितवनले अगाडी सारेका योजनामा सरकारले बजेटले कती सम्बोधन गर्यो भन्ने विषयमा बुझ्ने प्रयास गरेका छौं ।
बजेटलाई विश्वविद्यालयले कसरी हेरेको छ भनेर कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय रामपुर, चितवनकी उपकुलपति प्रा.डा. शारदा थपलियालाई सोधेका छौं । प्रस्तुत छ बजेटका सम्बन्धमा थपलियाले राखेको धारणा–
शिक्षा मन्त्रालयले विश्वविद्यालय मार्फत बजेटको व्यवस्थापन गर्ने कार्य विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले गर्ने गरेको छ ।
अध्ययन र अनुसन्धानलाइ नतिजामा आधारित हुनेगरि अनुदान वितरण गर्नको लागि बजेट छुट्याएको भनेर जुन किसिमको शब्दवाली प्रयोग भएको थियो त्यो अहिले पनि छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा उच्च शिक्षाका लागि १७ अर्ब ६४ करोड छुट्टाइएको थियो । तर अहिले त्योभन्दा पनि घटेर १७ अर्ब ४३ करोड मात्रै भएको छ ।
हामीले खासगरि उच्च शिक्षा अनुसन्धान विना जीवनउपयोगी हँुदैन भनिरहँदा अनुसन्धान र त्यसमा आधारित भएर विकास गर्नुपर्ने विषयलाई सरकारले चासो नदेखाएको देखियो ।
अझ कृषिको अध्ययनमा अनुसन्धान निकै आवश्यक पर्छ । सरकारले यसलाई अहिले पनि सम्बोधन गरेन । अनुसन्धानको पाटोलाई घुमाउरो भाषामा सम्बोधन गर्न खोजेपनि सरकारले ठोष योजना ल्याएको देखिएन ।
विश्वविद्यालय अध्ययन अनुसन्धान र प्रसारको उद्देश्यले स्थापना भएको र तीनवटै कुरा एउटै छाताबाट मात्रै नतिजामुखी हुने कुरा अन्र्तराष्ट्रिय अभ्यासहरुले देखाइसकेको कुरा हो । दुर्भाग्यपूर्ण भन्नुपर्छ त्यो किसिमले बजेट विनियोजन भएको छैन ।
राज्यमा विद्यमान कृषिका समस्याहरु के–के हुन र प्रसारको काम किसानसमक्ष कसरी पुर्याउने भन्ने
विषय अहिलेको मुख्य समस्या हो ।
यसको लागि सरकारले ठोष योजना ल्याएको देखिएन । तर, कृषिका विद्यार्थीलाई इन्र्टनमा सहभागी गराउने र अनुसन्धानमा विश्वविद्यालय आवद्ध गराउने कुरा उत्साहजनक छ । प्राविधिक विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरु लाइ उद्यममा जोडिनको लागि सहयोग गर्ने भन्ने कुरा पनि सर्हानिय रहेको छ । समग्रमा बजेट उत्साहजनक छ ।
Previous articleपोलिटेक्निक इन्स्टिच्युटले दियाे केरुङगा कृषि फर्मलाई निःशुल्क स्यानिटाइजर
Next articleकुश्मा नगरपालिकाले गर्यो स्वास्थ्यकर्मीको कोरोना बीमा